जान्नुहोस् ! यस्ता छन् क्यान्सर रोगीले खानैपर्ने जुसहरु
जनवरी 18, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments क्यान्सर, जुसहरु, डा. हेमराज कोइराला
क्यान्सर भन्ने बित्तिकै एउटा असाध्य रोगको रुपमा हामीसबैले बुझेका हुन्छौ तर आरम्भिक दिनमै ठम्याएर उपचार गर्न सके क्यान्सर पूरै निको हुनसन्छ । यो रोग लाग्दा क्यान्सर प्रभावित भागको कोषहरु अनियन्त्रित रुपमा बढ्ने, अन्य तन्तुहरुमा पनि प्रसारित हुने र अनियन्त्रित वृद्धि भइरहेका क्यान्सर कोषहरु रक्त अक्सिजनको अभावमा मर्ने गर्दछ । अन्तत्वगत्वा अनियन्त्रित कोष वृद्धिकै कारणले क्यान्सर रोगीको मृत्यु समेत हुन्छ । क्यान्सरलाई नियन्त्रणमा लिन वा क्यान्सरबाट बच्न क्यान्सर कोषहरुको वृद्धिमाथि लगाम लगाउनु पर्ने हुन्छ । यो लगाम तब मात्र सम्भव छ जब कोष बाहिरको वातावरण (Extra Cellular Fluid) पूर्ण प्राकृतिक हुन्छ ।
क्यान्सर कोषहरुको अनियन्त्रित वृद्धि हुनुको मुख्य कारण कोष बाहिरको वातावरणमा विजातीय द्रव्यहरूको संकलन भई कोष विभाजनलाई नियन्त्रण गर्ने तन्त्र विथोलिनुले हो । कोष बाहिरको वातावरणमा विजातिय द्रव्य संकलित हुदाँ यी द्रव्यहरुले सुसुप्त अवश्थामा रहेको कोषको क्यान्सर कारक जीन (Oncogene) लाई उत्तेजीत गरेर अनियन्त्रित रुपमा विभाजित हुन प्रेरित गर्दछ । यो अनियन्त्रित वृद्धि नै क्यान्सर हो र यसबाट निजात पाउन कोषको बाहिरको वातावरणमा विद्यमान विषहरुको शोधन हुनु पर्दछ । यो सोधन केहि प्राकृतिक तरिकाले उब्जाईएका फलफूल एवं तरकारीको जुसको सेवनले सम्भव छ । यसर्थ क्यानसर रोगीले निम्न फलका रसहरूको सेवन गर्नु पर्दछ ।
१. गहूँको जमराको जुस
गहूँको जमरामा प्रचूर मात्रामा क्लोरोफिल पाईन्छ । क्लोरोफिलले आफैमा एण्टिअक्सिडेण्ट र एन्टि म्यूटाजेनिक यौगिक हो । क्लोरोफिलको सेवनले राता रक्तकोषहरूको वृद्घि गराएरको तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन । रक्तकोषहरू बढ्दा क्यानसर ग्रस्त तन्तुहरूमा ज्यादा अक्सिजन पु~याएर क्यानसर कोष मार्न सहयोग पु~याउदछ । गहूँको जमरामा क्यानसर प्रतिरोधि सेलेनियम र लियट्राईल पनि पाईन्छ । गहूँको जमरामा १३ किसिमका भिटामिनहरू, बिसैवटा अमाईनो एसिडहरू र एण्टिअक्सिडेण्टहरू पाईन्छ, । यी सबै तत्वहरू क्यानसर प्रतिरोधी हुन ।
२. कालो अंगुरको जुस
अंगुरमा लाइमेनिन (Limonine) नामक फाइटोकेमिकलले क्यान्सर कारक तत्वहरुलाई हटाउन मद्दत गर्दछ । अंगुरको बिउलाई मुख्यत कोलन–क्यान्सर (ठूलो आन्द्राको) को उपचारमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ । अंगुरमा मोनोटारपेन्स (Monotarpens) नामक तत्व पनि छ । मोनोटारपेन्सले पनि क्यान्सर कारक तत्वहरु शरीरबाट हटाउन मुख्य भूमिका खेल्दछ ।
३. गाजरको जुस
गाजर पनि क्यान्सर प्रतिरोधी फाइटोकेमिकल्सल भरिएको फल हो । गाजरका विद्यमान बीटा क्यारोटीन नामक तत्वले मुख्यत छालाको क्यान्सरको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा ठूलो भूमिका खेल्दछ । गाजरले क्यान्सर तन्तुको क्षय (Tumor Necrosis) पश्चात हुने घाउँहरु सन्चो हुन पनि मद्दत गर्दछ ।
४. चुकन्दरको जुस
पर्याप्त मात्रामा एण्टिअक्सिडेण्ट र भिटाभिनहरुले भरिएको चुकन्दर क्यारोटेनोइडसहरूको राम्रो स्रोत हो । चुकन्दरमा विद्यमान क्यारोटेनोइइसले सबैखाले क्यान्सरको रोकथाम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । रगतको क्यान्सर (ल्यूकेमीयाको) उपचार गर्न पनि क्याराटेनोइडसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ
५. गोलभेंडाको जुस
गोलभेंडा भिटामिन सी को खजाना हो । भिटामिनहरुका अलावा गोलभेंडामा सोडियम, फस्फोरस, क्याल्सियम, पोटासियम, म्यानेसियम र सल्फर जस्ता थुप्रै खनिज एवम् लवणहरु पाईन्छन् । गोलभेंडाको रस मुख्यत प्रोष्टेट क्यान्सरका लागि खुवाउने गरिन्छ । गोलभेंडामा विद्यमान ग्लुटाथायन नामक तत्वले कोषहरुलाई अक्सिडेटिभ स्ट्रेसबाट बचाउनका साथै प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सशक्त पार्ने काम पनि गर्दछ ।
६. ब्रोकाउलीको जुस
ब्रोकाउलीमा इन्डोल–३ कार्बीनोल ९क्ष्लमयभि (Indole –3Carbinol) नामक तत्व पाइन्छ । ईन्डोल ३ कार्बिनोलले स्तनको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र अण्डाषयको क्यान्सरको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा मुख्य भूमिका अदा गर्दछ । इन्डोल–३ कार्वीनोललाई इष्ट्रोजन हारमोन प्रतिरोधि र प्रतिस्पर्धा प्रणाली ससक्त पार्ने तत्वको रुपमा बुझिएको छ ।
७. सलादपत्ताको जुस
पर्याप्त मात्रामा सल्फर, क्लोरिन, सिलिकन र बीकम्प्लेक्स भिटामिनहरूले भरपुर सलादपत्ताको जुस फोक्सोको क्यानसरको लागि उपयोगी छ ।
८. नोनीको जुस
नोनीको जुस फष्ट स्टेजको क्यान्सर निको पार्न सक्ने क्षमता राख्दछ । नोनीको जुसले क्यान्सर कोषहरुलाई नष्ट गर्नुका साथै क्यान्सर कोषहरु खाइदिने सेता रक्त कोषहरु पनि बनाउन मद्दत गर्दछ ।
← वास्तुशास्त्र अनुसार घर बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने अत्यावश्यक कुराहरु
जान्नुहोस् ! कब्जियतको कारण र उपचार →
डिसेम्बर 8, 2018 डिसेम्बर 8, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
2 thoughts on “क्यान्सर रोगीले खानैपर्ने जुसहरु”
Pingback:यस्ता छन् चुरोट पिउदा महिलालाई पुरुष भन्दा बढी हुने खतराहरु